TOETRY NY ANDRO : Ahiana hivadika rivodoza ilay andian-drahona any Avaratra Atsinanan’i Diego
Miovaova sy mivadibadika tanteraka ankehitriny ny toetr’andro eto Madagasikara. Hatreto aloha dia ny oram-baratra arahina tafiotra mafy no tena atahoran’ny mponina. 6 novembre 2018
Raha tsiahivina kely izao dia teny amin’ny Faritra Atsimondrano iny no nahapotehana zavatra goavana, indrindra nandritra ny firotsahan’ny havandra ny volana oktobra lasa teo. Lasibatra tamin’izany ireo voly marobe teny amin’ny manodidina. Sahiran-tsaina tanteraka ny mponina satria tsy mety ho marin-toerana ny toetrandro tato hoa ato.
Tsy dia nahitana rotsak’orana be toy ny tamin’ny taon-dasa rahateo koa no sady mbola hita taratra indraindray ny volon’andro ririnina. Fantatra tamin’ny loharanom-baovao voarainay, omaly avy amin’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro ary fa misy andian-drahona arahi-maso amin’izao fotoana izao ny ao amin’ny ranomasimbe Indianina. Any amin’ny 1660 km Avaratra Atsinanan’ Antsiranana no misy azy ary ahiana hivadika ho rivodoza, ato anatin’ny roa na telo andro.
Araka ny tatitra voaray hatrany dia tsy misy fiantraikany amin’ny mety ho fivadibadiky ny toetr’andro eto amintsika izany ao anatin’ny dimy andro. Arahina maso akaiky anefa na izany aza ny fizotrany. Ho maina sy hanevokevoka araka izany ny andro nanomboka omaly, ka hatramin’ny 11 novambra ho avy izao. Hitsitokotoko ny orana tandrifin-drahona ho an’ny eto afovoan-tany, Faritra Melaky ary faritra Bongolava, hiitatra any amin’ny tapany Atsimon’ny Nosy izany ny faran’ny herinandro.
Ho maina kosa ny androany amin’ny faritra sisa. Na izany aza dia tsy hihetsika firy ny marim-pana ka [15-25°C] ny marim-pana ambany, [29 - 37°C] kosa ny marim-pana ambony . Milaza tsy tapaka ny fiovan’ny toetry ny andro kosa ny eo anivon’ny sampana mpamantatra izany raha toa ka misy fiovana mety atahorana.
Nokasain’ny sipany hamidy 200 tapitrisa Ariary ilay tovovavy ANTSIRABE (298) 9 décembre 2019 Tovovavy iray nendahin’ny mpamily bajaj, voatsatoka antsy teo amin’ny lohany ANTSIRANANA (200) 10 décembre 2019 Be fitiavan-tena sy fitiavan-tseza RAVALOMANANA SY RAJAONARIMAMPIANINA (174) 10 décembre 2019 Azo kitihina ny lalàna mifehy ny fanambadiana TOLO-DALANA NAROSO (167) 5 décembre 2019 Mitaraina amin’ny tsy fanarahan-dalàna nataon’ny antoko TIM MPONIN’IVATO (167) 9 décembre 2019 Mpandraharaha iray nivadika tamin’ny fanekena MAHAJANGA - TRANO (144) 10 décembre 2019